हलिउड समाचार Archives | Cinemax Nepal Tv
क्यालीफोर्नीयामा भएको भिषण आग लागीबाट हलिउड अभिनेत्री तथा गायीका माईली सायरस र फिल्म ३०० का मुख्य अभिनेता जेरार्ड बटलरको घर पनि जलेर खरानी भएको समाचार प्रकाशीत भएको छ । क्यालीफोर्नीयाको जंगलबाट सुरु भएको यो आगलागीलाई अमेरीकी ईतिहासको…
पप स्टार माइकल ज्याक्सनका सुपरहिट पाँच गीत,जसलाई संसारमा आज पनि सुनिन्छ;
विश्व विख्यात पप सिंगर माइकल ज्याक्सन २००९ मै यो संसार बाट विदा भएता पनि उनको डान्स तथा गीतहरुले संसार जुन छाप छोडेको छ त्यो सधैका लागी कायम भएको छ। उनले डान्समा मात्र नभएर गीतका कारण पनि संसारमा धेरै नाम कम[ए जसका कारण अहिले पनि पप गीत…
एजेन्सी । पछिल्लो समय अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र निक जोन्सको सम्बन्धको बारेमा निकै चर्चा हुन थालेको छ । यो जोडी पछिल्लो समय मुम्बई पनि आएका थिए, भने अहिले उनीहरु गोवामा होलिडे मनाईरहेका छन् । यो जोडीले कहिले बैबाहिक बन्धनमा बाँधिन्छन्…
क्वान्टिको विवादमा प्रियंका चोपडाले मागिन माफी
अमेरिकाको फेमस टिभी सो 'क्वान्टिको'मा हिन्दुलाई आतंकवाद सँग जोडिएको सिनका कारण प्रियंका चोपडाले माफी मागेकी छन्। उक्त मुद्दामा उनले ट्वीट गर्दै भनिन कि " क्वान्टीकोमा देखाईएको एक सिनका कारण धेरैको भावनामा ठेस पुगेको छ।मेरो उद्देश्य कसैको…
अब हलिउड फिल्ममा पनि ‘लुंगी डान्स’ देखाउँदै दीपीका
'ट्रीपल एक्स: रिटर्न अफ जेंडर केज' बाट हलिउड फिल्ममा प्रवेश गरेकी भारतीय अभिनेत्री दिपिका पादुकोण दोस्रो हलिउड फिल्मको तयारी गरिरहेकी छिन्। उनि पुन ट्रिपल एक्स 4’ मा देखा पर्ने छिन्।तर दीपिकालाई यस फिल्ममा बलिउडमा झैँ डान्स गरेको देख्न…
चर्चित हलीउड चलचित्र 'मार्बल स्टुडियो' यान्ट-म्यान एंड द वास्प को आधिकारिक ट्रेलर सार्बजनिक भएको छ । सार्बजनिक भएको दुई दिनमामा नै ट्रेलरले दर्शकको राम्रो साथ पाउदै १ करोड भन्दा माथि भियुज प्राप्त गरिसकेको छ । नेपालमा समेत युटुब ट्रेन्डिङ…
ट्रेन्डिङमा ‘डेडपुल २’ को ट्रेलर, कस्तो छ ? हेर्नुस (भिडियो)
चर्चित हलीउड चलचित्र 'डेडपुल' को शिक्योल चलचित्र 'डेडपुल २' को ट्रेलर सार्बजनिक भएको छ । ट्रेलरमा माया, प्रेम एक्शन, कमेडीलाई देखाईएको छ । सार्बजनिक भएको एक दिनमानै ट्रेलरलाई दर्शकहरुको निकै साथ मिलेको छ । नेपालमा समेत मन पराईएको ट्रेलर…
टेलर सुइफ्टको ‘डेलीकेट’ ट्रेन्डिङमा, कस्तो ? छ हेर्नुस (भिडियो)
चर्चित हलिउड गायिका टेलर सुइफ्ट को एक साता अगाडी सार्बजनिक भएको गीत 'डेलीकेट' नेपालमा पनि लोकप्रिय बन्दै ट्रेन्डिङ मा पर्न सफल भएको छ । गीत युटुब ट्रेन्डिङ ५ मा पर्न सफल भएको छ । गीतमा टेलर आफै फिचारीङ रहेकी छिन् । रोमान्टिक भर्सनको गीतको…
हलिउड चलचित्र ‘एभेन्जर्स इन्फिनिटी वार’ ट्रेलर संगै ट्रेन्डिङमा (भिडियो)
एक्शन प्रधान फिल्ममा निकै डरलाग्दा दृश्यहरु समेत रहेका छन् । यसअघि पनि फिल्मको एक ट्रेलर सार्बजनिक भएको थियो । फिल्मको यो दोश्रो ट्रेलर सार्बजनिक भएको हो । ट्रेलरले २ करोड ८६ लाख भियुज पाएको छ, भने १२ लाख बढी लाईक र १५ हजार बढी डिसलाईक…
ब्रुनो मार्सलाई सर्वाधिक अवार्ड
लसएञ्जल्स(एजेन्सी) । अमेरिकाको न्यूर्योकमा आयोजना गरिएको ६० औं ‘ग्रामी अवार्ड’मा पप स्टार ब्रुनो मार्सले पाँच अवार्ड जितेका छन् । मार्सको एकल गीत ‘देट्स वाट आई लाइक’ले ‘सङ अफ द इयर’को अवार्ड पनि पायो । मार्सको यो गीतले लुइस फोन्सी, डैडी…